Jurgen Klopp Oo Qorsheynaya In Uu Dib U Habeyn Ballaaran Ku Sameyo Liverpool Iyadoo Lix Xiddig Ay Bixi Karaan
Home Horyaalka Ingiriiska Jurgen Klopp oo qorsheynaya in uu dib u habeyn ballaaran ku sameyo...
Difaaca Liverpool ee horyaalka Premier League ayaan u qorsheysneyn haatan iyadoo Reds ay haatan toban dhibcood ka hooseyso kooxda hogaanka heysa ee Manchester City, tababaraha Jurgen Klopp ayaana ku mashquulsan suuqa kala iibsiga xagaaga.
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa lagu soo waramayaa inuu qorsheynayo dib u habeyn uu ku sameeyo kooxdiisa xagaaga waxaana laga yaabaa inuu arko lix xiddig oo kooxda koowaad ka tirsan kuwaasi oo bixi kara.
Virgil van Dijk iyo Joe Gomez ayay u badan tahay inaysan mar kale dheelin xilli ciyaareedkan iyadoo Klopp uu ku mashquulsanaa sidii uu u heli lahaa saxiixyo cusub bisha Janaayo.
Tababaraha ayaana u adeegsan kara suuqa kala iibsiga xagaaga inuu dib u habeyn ku sameeyo kooxdiisa sida ay sheegayaan wararka.
The Sun ayaa sheeganeysa in Xherdan Shaqiri uu bixi karo inkasta oo uu fursado badan ka helay keydka toddobaadyadii u dambeeyay.
Athletic ayaa intaas ku dartay in Alex Oxlade-Chamberlain uu sidoo kale u dagaalamayo mustaqbalkiisa isagoo kaliya labo kulan kusoo bilowday Premier League xilli ciyaareedkaan waxana uu ku jiraa dadka bixi kara.
Georginio Wijnaldum ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga waxaana laga yaabaa inuu baxo iyadoo Barcelona ay xiiseyneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland.
Goolhaye Adrian ayaa lumiyay booskiisa madaama lambarka 2-aad ee Alisson uu siiyay Caoimhim Kelleher sidoo kale laacibkii hore ee West Ham ayaa ka tagi kara Liverpool.
Divock Origi ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku sii socdo wadada isagoo dhaliyay kaliya hal gool 16 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Naby Keita ayaa sidoo kale bixi kara, sida laga soo xigtay The Athletic, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe uu dhibtoonayo tan iyo markii uu ku soo biiray Reds.
Previous articleTammy Abraham oo Chelsea ka caawiyay inay iska xaadiriso Wareega 8-aad ee FA Cup-ka
Next articleBayer munich oo barbareysay Rikoorkii barcelona ee lixda koob xilli Guardiola uu ka hadlay guushaas.